आज जनैपूर्णिमा, रक्षा बन्धन, जनैको तीन सूत्र, नौ तार र पाँच गाँठोको बैज्ञानिक महत्व के छ ? « Swadesh Nepal
आज जनैपूर्णिमा, रक्षा बन्धन, जनैको तीन सूत्र, नौ तार र पाँच गाँठोको बैज्ञानिक महत्व के छ ?
काठमाडौं । आज (बिहीबार) यज्ञोपवित एवं जनै पूर्णिमा हो । श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको दिन विधि पूर्वक पूजाआजा गरी पवित्र बनाईएको जनै धारण गरी यो पर्व मनाउने गरिन्छ । नेपालकै तराई भेगमा यही दिन दिदी बहिनीले दाजु भाइहरुलाई राखी बाँध्ने चलन समेत रहेको छ ।
द्विज जातीहरु जो जनै लगाउँछन् (ब्राह्मण, क्षत्री र वैश्य) उनीहरुको लागि यो पर्व पवित्र पर्वको रुपमा मान्ने गरिन्छ । तर, धेरै तागाधारी (जनैधारी)हरुलाई जनैको बैज्ञानिक महत्वबारे थाहा नभएको पनि हुनसक्छ । त्यसैले त्यसको महत्वबारे प्रकाश पार्ने प्रयास पारिएको छ ।
यज्ञोपवीतको एक(एक तारमा तीन-तीन तार हुन्छ । यसै गरी कूल तारको संख्या नौ होती हुन्छ। एक मुख, दुई नासिका (नाक), दुई आँख, दुई कान, मलद्वार र मूत्रद्वार दुई गरी कूल नौ हुन्छ